Meeqaa U Harsan Farmaajo..4 Maalin Mise 4 Sano? | Xaqiiqonews
Meeqaa U Harsan Farmaajo..4 Maalin Mise 4 Sano?
Mushkiladda Soomaaliya ay hadda wajaheysa waxaa lagu soo koobi karaa oo kaliya laba kalmadoood oo ah “8 Febaraayo”. haddaba annaga oo niyadda ku heyna xogaha suuqa yaalla iyo khibradii hore ee madaxda soomaaliya looga bartay maxaynu filan karnaa 8 Febraayo ka dib?
Uma baahnin in aan faafaahin ka bixino filimka dukumenteriga ee ciwaankiisu yahay “heshiiska Samareeb”, kaasi oo uu soo saare ka yahay yahay James Swan.
Horay ayaan u daawaday filimka, waxa uuna xambarsan yahay oo kaliya halkan macluumaad, kaasi oo ah: waxaa lagu heshiinayaa in lagu heshiiyo wixii heshiiskii hore lagu heshiiyey, taasi oo sharxeysa waxa ka soo bixi kara shirka madaama horay loo ogaa natiijada heshiiskii hore.
Bal aan isku dayno..in aan u boodno su’aasha qiimaheedu boqolka geelka ah uu ku kacaayo : Hadii sida ay wax u socdaan ku dhamaadaan maxaa filan karnaa 8 Febraayo ka dib?
Khiyaaraatka La Filan Karo.
Waan ogahay Farmaajo waxa uu sii ahaan karaa Madaxweynaha Soomaliya Labo xaaladood midood hadii ay dhacdo:.
–Hadii Barlamaanku Waqti Kororsi Siiyaan: Farmaajo waxa uu doonayaa in uu kulan la qaato Barlamaanka inta aan la gaarin 8 feb, hadii uu kulankaasi Farmaajo dalbado Muddo kordhin Barlamaankan ay ansixiyeen waxa uu sii ahaan karaa Madaxweyne 8 Feb ka dib.
–8 Feb in la gaaro oo aan la helin qof badala: tani waa dhif iyo naadir in ay dhacdo laakiin hadii aanan la helin qof sharciyan badala Madaxweynuhu wuxuu xaq u yeelanayaa in uu xilka sii haayo ilaa amar dambe.
Waxaan dhihi karnaa, dhinaca kale waxaa jira khiyaaraat suurtagal ka dhigaaya in Farmaajo uu iska wareejiya Furaha madaxtooyda, mid ka mid ah ayaa ah in uu isku casilo barlamaanka hortiisa kulan soo socda,waxaa jira warar aan la xaqiijin oo arintaasi taageeraya.